Finoana – fanilo
Ny volana malagasy sy ny tononandrony: Manana ny orim-bintana mifanandrify aminy
Toy ny firenena rehetra, manana izay iheverany ho fihodinkodina��ny tany izay diaviny koa ny Malagasy. Nisy, araka izany, na mbola tsy nisy oniversite aza, tamina��ny androna��ny Ntaolo, ny mpandinika manokana ny fihodina��ny eny amina��ny habakabaka eny sy ny fifandraisana��ny olombelona amina��izany. Araka ny voalaza ao amina��ny boky a�?Fomba malagasya�?, ny mpanandro no mamantatra ny tononandrona��ireo zaza teraka, tamina��ny alalana��ny fandinihana ny volana.
Anjara, lahatra, tendry, vintana: Siansa sa finoana?
Isana��ny mampiady hevitra ny maro ny fandraisana��ny fiarahamonina malagasy ny zavatra efa-doha dia ny atao hoe Anjara, Lahatra, Tendry ary Vintana. Ny anjara sy lahatra ary tendry dia saika naravina��ny frantsay amina��ny teny tokana hoe a�?Destina�? izay adika amina��ny teny anglisy hoe a�?Destinya�?. Ny teny hoe a�?vintanaa�? moa, raha ny fikarohana nataona��ireo mpahaiolona miompana amina��ny fivavahana sy ireo mpanandro, dia misy hifandraisany amina��ny teny soailii na ireo mpiavy teto amintsika niaraka tamina��ny malaizianina sy indonezianina hoe a�?bintanga�?, izay midika hoe a�?kintanaa�?.
Ny tsiny sy ny tody: Misy tokoa ve?
Mbola tsy tonga teto amina��ity Nosy ity ireo misionera vahiny dia efa nanana ny fiheverany ny atao hoe tontolo tsy hita maso ary toy ny olombelona rehetra manerana izao tontolo izao ihany koa, nahatsapa fa ao anatina��ny tontolo misy azy, misy hery roa mifanohitra hatrany...
Toy ny firenena rehetra, manana izay iheverany ho fihodinkodina��ny tany izay diaviny koa ny Malagasy. Nisy, araka izany, naA� mbola tsy nisy oniversite aza, tamina��ny androna��ny Ntaolo, ny mpandinika manokana ny fihodina��ny eny amina��ny habakabaka eny sy ny fifandraisana��ny olombelona amina��izany. Araka ny voalaza ao amina��ny boky a�?Fomba malagasya�?, ny mpanandro no mamantatra ny tononandrona��ireo […]